musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » COVID-19 yekupfuura hutano ikozvino inosungirwa muItaly
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Yakafungidzirwa sechishandiso kunyora munhu COVID-19 chimiro uye majekiseni ekufambisa kufamba, zvitupa zvecoronavirus zvakatotangwa munyika dzakawanda dzeEU.
Italy ikozvino inoda COVID-19 "Green Pass" chitupa chekudzivirira chevashandi vese venyika.
Vashandi veItaly vasina chitupa chehutano vaizomiswa kubva kumabasa avo vasina kubhadhara.
Vashandi vanoratidzira basa vasina chitupa vanozobvisiswa faindi hombe kubva pa600 kusvika 1,500 Euro.
Chitupa che COVID 'Green Pass' chinosungirwa kune vese vashandi veItari, sekuronga kwatsva chirongwa ichi, chakabvumidzwa nehurumende yeItaly nhasi.
Zano, rakagamuchirwa nehurumende yeItaly nhasi, uye inotsigirwa zvinesimba neItari Seneti (ine 189 yakaivhotera, iine 32 chete inopesana uye mbiri isingabvumirwe) ichafanirwa kutanga muna Gumiguru 15.
Zano nyowani, iro raizoona avo vasina pasipoti vachiiswa pazororo vasina mubhadharo, richaramba richishanda kusvika panosvika kupera kwegore rino.
Kutanga kubva muna Gumiguru 15, vese veruzhinji- uye vakazvimirira- vashandi vemuItaly vanofanirwa kuwana COVID-19 'Green Pass' chitupa.
Avo vanokundikana kuburitsa chitupa kana vakumbirwa vanogona kumiswa kubva kumabasa avo mushure menguva yenyasha yemazuva mashanu, kunyange vasingakwanise kudzingwa.
"Tiri kuwedzera chisungo chegreen pass kune nyika yese yebasa, yeruzhinji neyakazvimiririra, uye tiri kuzviita nekuda kwezvikonzero zviviri zvakakosha: kuita kuti nzvimbo idzi dzive dzakachengeteka uye kuita kuti mushandirapamwe wedu wekudzivirira hutachiona huwedzere," gurukota rezvehutano Roberto Speranza akadaro.
Vashandi vasina gwaro rinozivikanwa re COVID-19 vachiri kungotsunga kuratidzira basa vanogona kupihwa faindi hombe, kubva paUS $ 600 kusvika pa1,500 ($ 705 kusvika $ 1,175). Zvimwezve zvehurongwa zvinotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo munguva pfupi.
MunaAgasti, Itari akaita kuti chikumbiro chive chishuwo chekushanyira nzvimbo dzeruzhinji, senge maresitorendi nemabhawa, zvobva zvaita kuti zvive zvekumanikidza kune vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende kutanga kwemwedzi uno. Zvino, rave rekutanga nyika yeEuropean kuita chitupa chinosungirwa kune vese vashandi vayo.